UMZOBO WEOLIMPIKI SKATER UMERYL DAVIS UBANDAKANYEKE KUFEDOR ANDREEV - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Umzobo weOlimpiki Skater uMeryl Davis ubandakanyeke kuFedor Andreev: Yabona umsesane wakhe wokuzibandakanya
Umzobo weOlimpiki Skater uMeryl Davis ubandakanyeke kuFedor Andreev: Yabona umsesane wakhe wokuzibandakanya
Imbasa yegolide yeOlimpiki kunye 'nokudanisa neenkwenkwezi' intshatsheli uMeryl Davis ubhengeze ukuzibandakanya kwakhe kuFedor Andreev ngeCawa, nge-16 kaJulayi-jonga umsesane wakhe apha. (Ityala: Shutterstock.com)
Ngu: Esther Lee 07/17/2017 kwi-3: 13 PM
Vumela iseti elandelayo yemidlalo iqale. IOlimpiki mzobo wokutyibilika emkhenkceni kunye nembasa yegolide UMeryl Davis Uzibophelele kumlingane wexesha elide UFedor Andreev , Utyhile ngeCawa, nge-16 kaJulayi.
UDavis uthathe i-Instagram ukuveza iindaba, ebhala nje ifoto yakhe eyamkela umyeni wakhe wexesha elizayo ngomtshato wabo: 7/13/17. UAndreev, owayesakuba ngumdlali odlala emkhenkceni ngokwakhe, ngunyana womqeqeshi kaDavis, uMarina Zoueva. Esi sibini ngoku sikunye ngaphezulu kweminyaka emithandathu.
Iposi ekwabelwana ngalo nguMeryl Davis (@meryledavis) ngoJulayi 16, 2017 ngo-4: 12 pm PDT
UDavis, ophumelele ngegolide ngembuyelelwano emva koko waqhubekeka ekhusela ukuDanisa ngeeNkanyezi iMirror Ibhola, waqinisekisa ukugxininisa kraca yakhe entsha-isikwere esisikwere sedayimane esimthubi esine-halo-kumfanekiso kwi-Instagram. Esi sibini sitshatile eStinson Beach, eCalifornia.
Ixesha lisebenza ngokungagungqiyo kwimbaleki yobomi bonke, owabhengeza ukuba akazukubuyela kwi-Olimpiki ka-2018 ukuyokukhusela imbasa yakhe yegolide noCharlie White. Endaweni yoko, uya kube ecwangcisa umtshato wakhe.
Iivesi zebhayibhile malunga nothando lomtshato
yintoni ms. mfutshane
ngubani onokulawula umtshato
isicakakazi seleta yesindululo sokubekwa
Kunini ixilongo no melania betshatile